ång text on whatsapp
Vamwe vanhu vanovada uye vamwe vanhu vanovada. Asi SMS kana pfupi mubasa remasaisai inzira yakanaka yekuzivisa mashoko kune vamwe. Sezvo zvirongwa zvekubhadharwa mari uye kubhadharwa kwekubhadhara zviri kuwedzera uye zvisingakwanisi kudana, SMS inowanikwa pachigaro chekupedzisira. Zvisinei, kutumira magwaro kunogona kukuchengetedza munguva yekutambudzika. Uye kana iwe ukazviwana usingabatanidzwi masero kana foni yako yebheteri yakapera, kune dzimwe nzira dzokutumira SMS muIndia. Ichokwadi, iwe unogona kutovatumira kunze kwekusununguka. Saka nhasi, ndichava nehurukuro yandinoziva kuti munhu wose angada kuverenga pamusoro apa: hezvino nzira yekutumira SMS isina mahwanda muIndia.
Kune nzira dzakasiyana dzekutumira SMS isina mahwanda muIndia. Iwe unogona kutumira kuburikidza ne apps, websites uye dzimwe nzira. Zvisinei, kune mutungamiri uyu, tichave tichitsvaga mawebhusayithi e10 anokubvumira kutumira SMS isina mahwanda. Newebsite idzi, usatarisira zvakawanda. Vanogona kukubvumira kuti utumire SMS yakareba uye uchatema mharidzo pfupi kana yakanyanya kureba. Vamwe vangatosanganisira zviziviso paunenge uchishanda. Kunyange zvakadaro, kuva nekwanisi yekutumira maSMS asingabhadhari zvakagamuchirwa zvikuru.
Ini ndichaedza kuva akazara sezvandinokwanisa, panguva imwechete ndichiongorora webhusaiti. Ko pachava newebsite inowanikwa kumusoro here? Tichawana nokukurumidza.
Nzira yeWay2SMS yakatangwa zvakare kumashure mu2006 uye ichiri kusimba. Uye nevakawanda guides ikozvino iyo inotaura nezvekushandisa nekufamba nenzira, kushandisa iko kuchava nyore. Gore rino, Way2SMS ine musimboti wevashandi wepakati pe 40 mamiriyoni uye ichikura. Uye vakataura pachena, basa iri ringangodaro rive rakanyanya kushandiswa-rakanaka uye rinowanikwa kune mamwe mawebsite. Kana iwe uri pfupi pamari yako yeSIM khadi, izvi zvingava imwe yenzira dzaunogona kuwana nadzo kushamwari neshamwari dzako nemhuri.
Pane zvimwe zvinotarisirwa izvo zvaunoda kuzadza usati watanga kushandisa Way2SMS, kunyange zvakadaro. Chokutanga, iwe uchada kunyoresa pawebsite. Kunyora kunonyatsovimbisa kuti Way2SMS inopa zvakanakisisa ruzivo kune vese vashandisi, zvisinei kuti iwe ndiwe anotumira kana anogamuchira. Chaizvoizvo, rinova nechokwadi chokuti avo vanoshandisa sangano havashandisi pakushandisa zvisina kunaka kana kuparadzirwa kwemashoko. Icho chokwadi chekuchengetedzwa kwekugamuchira zvakanaka, zvisinei, pangave pane vamwe vanhu vanozeza kupa ruzivo rwavo kumawebsite paIndaneti.
Asi chimwe chinhu chikuru pamusoro pekunyora kwekunyora kwose ndechokuti zviri nyore sei. Paunenge wapinda mairi way2sms website, uchaona zvasarudzo zvokunyora kana kupinda. Uye iwe ungangove wakaona chinyorwa seichi kana iwe uri mukunyoresa:
Kana wapedza kuisa ruzivo rwezvinhu zvose, unongoda kupindura captcha. Ichi ndicho chimwe chekuchengetedza chekuchengetedza kuchengetedza kushandiswa kwewebsite ye spam uye kushatiswa. Bvumirana nemitemo nemamiriro ezvinhu, ipapo chengeta paVona uye Bvisa.
Iye zvino wava nekwanisi kutumira SMS kune ani zvake muIndia uye haufaniri kuripa chero chinhu. Uye iyo kukwanisa kupinda mukutaurirana nevanhu vari munyika yose kune rusununguko kunoshamisa. Iwe unowanawo zvimwe zvinhu neWay2SMS zvakadai se:
Uye kune zvakawanda zvakawanda zvaunofunga kuti wakasununguka kuwana. Asi izvo zvakanyatsobudisa pfungwa dzangu kukwanisa kwayo kushandura kune dzimwe mimwe mitauro. Iwe unongoda kunyora muchiChirungu, uye mushure mokunge uchinyorera muchiChirungu, uchakwanisa kuishandura muHindi, Tamil, Telugu kana Urdu. Icho chinhu chakanaka uye ndinofunga kuti vanhu vakawanda vachakwanisa kushandisa mukana uyu. Iko kukwanisa kuchengetedza mazita muIndaneti Book zvakare chinhu chinogamuchirwa. Iye zvino haufaniri kuverenga nhamba dzefoni uye iwe unogona kungozvichengetedza.
Kuti uite kwenguva pfupi, Way2SMS zvechokwadi inenge yakasungirirwa basa uye iwe unobatsirwa zvikuru nayo. Iko kunyoresa kuri nyore uye iwe unogona kutanga mumaminitsi.
Edzai Way2SMS kunze nekukanda pano.
Kazhinji munyika mazuva ano, vashandisi vewebhu webhusaiti vari mumutambo. Nhangemutange yekuve nenhamba yakawanda yevashandisi, uye rudzi rwekuva newebsite yakatarisa. Uye nemhando yorudzi urwu panzvimbo, dzimwe nzvimbo dzewebhu dzinotanga kuderera. Uye ingangodaro inokonzera kusagadzikana kwepaiti. Kune vanhu vane makombikiti ekupedzisira, kutakura mapikicha anonyanya kuwanda webhutori kunotora makore uye zvinotora zvakawanda zvakawanda. Apa ndipo apo SMSTI.in inopenya chaizvo.
Iyi basa reSMS risina kukwana harifaniri kutarisa kuve nemifananidzo yakatarisa pane webhusaiti kunze uko. Izvo hazvidi kuti iwe upinde nemapango kuti unyore. Uye iyi webhusaiti yekutendeseka haina chokwadi haifaniri kuwana mashoko ako. Iwe hausi kuputirwa nehuwandu hwemashoko uye hapana maikorodhe akawandisa anokwanisa kupinza PC yako. Zviri kukurumidza uye hauzove nematambudziko ekubvarura iyi webhusaiti. Zvakanaka chaizvo uye ndinofunga kuti ndizvo zvakanaka.
Heino nzira yekunyora mu SMSTI.in: iwe hausi. Icho chinhu chikuru chausingafaniri kubhadhara uye kupa ruzivo rwako. Zvechokwadi, chikamu ichi chebasa racho chaizonyatsovhenekera mune imwe nguva. Kana iwe uchinyatsoda kutumira rumwe ruvara rwehupenyu kana hupenyu hwekufa, nei iwe uchida kuenda nemhando uye mafomu kuti uzviite? Zvishoma zvisingabatsiri uye ndinokwazisa SMSTI.in nekuda kwekusava nekunyora.
Zvisinei, nokushayikwa kwekunyora, zvinenge zviripo zvimwe zvingaitika. Kune imwe, pangava nemumwe munhu angashandisa zvakanakisisa purogiramu yemabasa avo akaipa. Vangatanga kutanga kutumira mameseji kushungurudzwa uye zviziviso en masse. Asi zvinoratidzika kuti vashanduki shure kwevekugadzira webhusaiti vari kufungidzira mberi uye vakabatanidza IP tracking kune website. Muchidimbu, webhusaiti yacho ichacherechedza IP kero yekombiyuta yauri kushandisa uye zvichida kumisa zvikumbiro zvakawanda kubva kune imwe kombiyuta.
Saka usatombofunga nezvekutumira spam mharidzo, pasinei newebsite isina kubhadhara.
Izvo zvinhu hazvisi izvo zvakawanda. Uye iyo webhusaiti yepamusoro inoenzanisa nekuenzaniswa kwezvikwata zvepamusoro zvinoda kubhadhara. Asi ndizvo zvazviri. Iwe unenge uine mukana wakazara wezvinhu, zvechokwadi, uchakwanisa kutumira SMS kune ani zvake muIndia. Ichatora chikamu chenyika yeIndia yenyika ye91, uye iwe unogona kuwedzera nhamba dzasara.
Pane muganhu wehuwandu hwevanhu vamunogona kutumira mumashoko ako. Iwe chete uchakwanisa kutumira vanhu vane 160 muhuwandu. Uye kunyange iwe unomanikidzwa nhamba yevanhu vamunogona kutumira, usanetseka. Nzvimbo yepaIndaneti inogunzva zvimwe zvinhu zvisingasimbiswi nedzimwe mawebsite. Chimwe chinhu chinonyanya kukoshesa pane kukwanisa kwayo kutarisa nzvimbo yemashoko munguva chaiyo. Izvozvo zvinoreva kuti iwe unogona kuwana kana shoko rakatumirwa, kana kuti chimiro chaicho chemashoko.
Asi iyo yakanakisisa pane iyi webhusaiti ndeyokuti hauwane chero zvivako. Izvozvo, hapana zviziviso zvebasa iri. Kunyange zvazvo webhusaiti yacho isina kubhadhara kana kupinda, inenge isingabhadharwi nemashamba. Pasinei nokuti webhusaiti yacho inowana nekuda kwechisarudzo ichocho, inogona kunge iri nyaya mune zvayo. Asi ikozvino, unogona kutumira SMS isina mahwanda pasina mhirizhonga uchishandisa SMSTI.in uye ini ndakanyatsonaka nezvo.
Edza SMSTI.in nekudhonza pano.
Kana tiri kutaura pamusoro pebasa rakanaka chaizvo, neUI iyo iri nyore kufamba, usatarisa zvakare. Fast2SMS inofanirwa kuva iyo yakanakisisa webhusaiti mune urongwa uye inotumirawo SMS isingabhadhari. Iwe uchakwanisa kuita mabasa mazhinji akasiyana-siyana uchishandisa iyi webhusaiti, kana uri kutsvaga SMS isina mumiririri muIndia, iwe wakasvika panzvimbo yakarurama. Muchikamu chechikamu, Fast2SMS zvechokwadi ine zvakawanda zvokupa.
Nzvimbo yepaIndaneti yakaratidza kuti yakatumira mamiriyoni e-XMUMX asingabhadhari e-SMS. Kunyangwe zvisingatauri nguva yechiratidzo cheiyo, zvingave ndezvemaawa ekupedzisira e21 kana mugore rapfuura. Asi zvakadaro, ihuru huru yekukwanisa kutumira iyo mizhinji mharidzo yekusununguka. Uye nenzira dzakadaro dzakajeka kuti utange, unogona kusimudza kuti mamiriyoni emamiriyoni e24 akatumirwa mumaminitsi mashomanana. Nzvimbo yepaIndaneti ndeyechokwadi pfuma inofanira kuvhurwa uye kana waivhara iyo yakazaruka, uchawana mamwe maitiro mukati. Izvo chete zvakaderera kune zvose izvi zvinoshandiswa uye zvibatsiro ndezvokuti iwe unofanira kutanga uchinyoresa.
Asi kunyora hakusiwo zvakaoma kuita.
Kuzvinyorera ne Fast2SMS inofanirwa kutengesa. Iwe unogona nyore kunyora nekuenda kune webhusaiti kana iwe kungosarudza pano. Kana uchinge uripo, iwe uchabvunzwa mibvunzo miviri kuitira kuti iwe ugone kunyatsogadzirirwa muitiro. Kufanana nedzimwe nheyo dzinoda kuti iwe ubhabhatidzwe kushandisa sangano ravo, unogona kunonoka mukupa ruzivo rwako kunewebsite.
Zvisinei, musarega kubatanidzwa kunyorera iwe. Ichokwadi, inofanira kuita kuti unzwe wakachengeteka. Chikonzero chekuti nei uchibvunzwa kunyoresa mune dzakawanda zvemasayiti e-SMS asingabhadhari ndeyekuchengeta nheyo dzemashoko aunotumira. Kunyange iwe pachako usingafungi nezvekushandisa kushandisa Fast2SMS, vamwe vanogona. Saka kuti ugare wakachengeteka, Fast2SMS inogona kutarisa yako IP kero uye inogona kutotora nhamba dzenhare dzinoshandiswa nebasa pacharo. Iyo nzira inongogutsikana kuti basa racho harisi kushandiswa kwezviito zvakashata se spamming uye yakaipa phishing.
Uye kana iwe wakamboona magwaro aya anonyunyuta, iwe uchaziva kuti vateereri vanoreva zvakanaka. Chero mamiriro ezvinhu, kubhadhara kunoiswa ipapo nokuda kwechikonzero. Uye iwe zvechokwadi uchave uchiita nharaunda yefoni yefoni nekufarira. Ingovimba netsika uye iwe uchange uri kutumira magwaro asingasviki panguva!
Pane zvakawanda zvezvinhu zvaungashandisa mushure mekunge makanyoresa ku Fast2SMS. Heano zvimwe zvezvinhu izvo Fast2SMS inopa:
Chimwe chinhu chakandishamisa chaizvo pano ndicho SMS yakarongwa. Kana tikangokanganwa chiitiko chakakosha sezuva rekuzvarwa kana gore rinoyeuka, saka handifaniri kunetseka nezvazvo zvakare. Zvose zvandinoda kuti ndiite ndezvokupindira nhamba yefaira yemunhu wandinoda kutumira uye kuisa purogiramu yangu.
Chimwe chinhu chandinofunga kuti chichatibatsira vakawanda ndiyo SMS yakawanda. Iwe haungadi kuti upedze zvakawanda zvezvikwereti pane foni yako kuti uwane mharidzo yako. Iwewo haufaniri kutumira manyore SMS pasina munhu kune imwe nguva, unogona kungotumira shoko muzhinji.
Chero zvazviri, Fast2SMS ibasa guru rekutumira SMS pasina nyaya dzakawanda. Zvichida nyaya imwe chete yaunofanira kutora nayo ndeyokuzvinyora iwe pachako. Asi kupfuura iyo yakachengeteka uye yakachengeteka, haufaniri kunetseka pamusoro pechinhu chipi zvacho.
Tanga kushandisa Fast2SMS nekukanda pano.
Imwe basa guru raunofanirwa kutarisa ndiro webhusaiti ye 160by2. Iko inokubvumira kutumira SMS yakasununguka muIndia uye inogona kutumira aya mahara pachena munyika yose pasina mhinduro. Chinhu chete chavanokumbira? Iva nechokwadi chokuti mharidzo yako ndeyevanhu vane 160 chete uye pasi. Uyewo, unofanirwa kuve nechokwadi chokuti nhamba yefaira iwe zvaunotanga inotanga ne + 91, iyo inenge yakatooneka panguva ino. Uye ndiyo nzira yaunogona kutumira mharidzo muIndia pasina kunyange kubvisa rupee imwe chete.
Nzvimbo yepaIndaneti ye160by2 haisi iyo yakanakisisa kugadzirwa munyika. Asi inotungamirira kune mamwe madhipatimendi ayo andichave ndichikurukura gare gare. Sebasa reMMS risingabhadharwi, webhusaiti yacho icharamba ichikubvunza iwe kuti unyore kuti ushandise mabasa avo, asi ndinofunga kuti iwe unofanira kutotarisira. Kunyange zvakadaro, iyo inopfuura yepamusoro kushumira uye kune zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kushandisa uye kushandisa zvakanaka. Pamusoro pezvikomborero pane zvimwe zvandisati ndaona kubva kune dzimwe nhepfenyuro dzeSMS dzisingabhadhari. Nezvo zvakati, ngatitaure pamusoro pekunyorwa kwebhuku iyi webhusaiti.
Sezvo 160by2 webusaiti pachayo inotaura, kubhadhara kunotora 30 seconds. Uye ivo vakanga vasina kunyunyuta pavakataura izvozvo. Ndakaedza nzira yekunyora ini uye mumaminitsi mashoma ndakanga ndichitotumira magwaro akasununguka kune ani zvake muIndia. Pane zvikamu zvishomanana zvemashoko izvo webhusaiti inobvunza kwauri uye haisi biggie kuipa.
Uye iwe unodawo kupinda muCAPTCHA kuti ugadzirise kushanda. Mune zvimwe zviitiko, kufanana nedzimwe nhepfenyuro mune urongwa, zvakajeka zvakananga uye zvakaenzana. Uye kana watove wakanyoresa uye wakatsigira email yako, kupinda mukati kunenge nyore nyore sekungoverenga nhamba yako yefoni, password uye kurohwa kwegiyo mukati. Izvozvo zviri nyore.
Icho chiripo zvikamu zvakazara pane webhusaiti iyo iripo pane mamwe mawebsite. Izvi zvinosanganisira SMS yakawandisa, SMS yemazuva, uye SMS yakarongwa, pakati pevamwe. Funga nezvehuwandu SMS sezvinenge uri kutumira shoko reboka. SMS yakagadzirirwa inokubvumira kutumira mameseji pane dzimwe nguva, zvichida kwezuva rekuberekwa kana remakore. Chirongwa cheSMS chinenge chichigamuchirwa zvikurukuru kune avo vari kukanganwa (kufanana neni). Zvisinei, kune chimwe chinhu chakabata maziso angu pandaive ndichiongorora zvinobatsira iyo webhusaiti. Uye ndicho chikwata chekuwedzera shanduro.
The Browser Extension feature inonyanya kuvhara shanduro yeShm free mu browser yako. Pasinei nokuti uri kushandisa Google Chrome kana Mozilla Firefox, uchakwanisa kuisa 160by2 kwairi. Zvikomborero zvekukanda kuwedzerwa kune zvakawanda. Iwe unogona nyore nyore kugovera chero chinhu chipi zvacho chaunoona pawebhu kuburikidza neshamwari dzako nemhuri. Iwe unogonawo kutumira mameseji pairi peji imwechete - zvinoreva kureva, haufaniri kuchinja tate kuti ushandise sumo yeSMS.
160by2 zvakakodzera kukosha nguva. Uye iwe unogona kuwana inobatsira paunenge uchiedza kutumira SMS isina mahwanda.
Edza 160by2 nekunyanya pano.
5. Tumira SMS Iye zvino
Kunyange zvazvo vazhinji venyu vachinyanya kushandisa mashandisi emashoko e-SMS asingabhadhari kuti vashandise pachedu, vamwe vangada kuishandisa kune bhizinesi. Kana zvirizvo, SendSMSNow inogona kugadzirisa vose vanoshandisa mumwe nomumwe uye avo vanoita mabhizinesi. Nebhizimisi, ndinoreva kuti iwe unogona nyore nyore kuisa shanduro yekutumira SMS kuwebsite yako. Asi zvizhinji mune izvo gare gare.
Iwe webhusaiti haisi iyo yakajeka seyevamwe vari pane urongwa urwu. Uye kana iwe uchida chaizvo kutaurirana nehana yakanaka user interfaces, zvino webhusaiti ino ingasave yako. Asi kana iwe uchangobva kutsvaga webhusaiti kuti utumire mutsara mupine, zvino Tumira SMS Ino inogona kunge iri tiketi yako. Kusiyana nevamwe vari panhamba iyi, Tumira SMS Ino inokubvumira kutumira mameseji pasina kunyora, asi iwe unewo sarudzo yekunyora. Pane zvikomborero zvaunenge uchiwana nekunyoresa apo uchizvichengetedza kusununguka zvinongorambidza zvimwe zvekuwana kwako.
Tumira SMS Ino Kuregera
Kana uchangobva kuvhura webhusaiti, iwe unogona kutumira SMS nokukurumidza. Uye kune vanhu vazhinji, iyo ingadai iri mugumo wekubatana kwako newebsite. Zvisinei, kana iwe uchida kugara, saka ndine chokwadi chokuti uchawana zvakawanda zvakawanda. Kunyora kunokurumidza uye nyore, uye kana waita kuti uwane ruzivo rwauri kubvunzwa, iwe zvino unogona kukwira mukati mezvinhu zvakawanda izvo webhusaiti yacho inopa.
Tumira SMS Zvino Zvimwe
Iwe unogona kutumira nhamba imwe chete pasina kana iwe uchishandisa webhusaiti isina kubhadhara. Panguva iyoyo vashandisi vakanyoreswa vane ruzivo rwezvimwe zvinhu zvinokosha:
Iwe unogona kugamuchira mhinduro kumagwaro ako uye iwe unogona kuiverenga pawebsite
Kutsvaga munhoroondo yako yeSMS - zvino unogona kuona zvawatumira mameseji uye kuti ndiani
Gadzira Unyore Me bhokisi rewebsite yako
Uye iyo inongova chidimbu chechando. Pano pane zvimwe zvaunogona kushandisa, asi izvi zvitatu zvakajeka kwandiri. Kugona kugamuchira mhinduro ndechimwe chinhu chandisina kumboona pane mamwe mawebsite ndave ndakatarisa kusvika ikozvino, asi chokwadi ndechekugamuchirwa. Nhoroondo yeSMS zvakare chimwe chinhu chichave chakanaka kana iwe uchida kuchengeta zvinyorwa zvezvaunonyora.
Asi zvakanakisisa zvandakawana newebsite iyi ndiyo Text Me box. Kana iwe uchida kuunza webhusaiti yako kana bhizimisi pedyo nevatengi, izvi zvingava nzira yekuenda nayo. Iwe zvino unogona kugamuchira magwaro kubva kune vatengi, uye zvose zvavanoda kuita ndezvokutora captcha. Kunze kweizvozvo, vachakwanisa kubvunza mibvunzo yavo zvakananga kwauri uye kunoita kuti kutengesa uye zvingaita zvebhizimisi zvigadziriswe kuita nyore. Ndicho chimwe chinhu kuedza.
Iwe unogona kunyora uye kushandisa Shandisa SMS Ino nekudhonza pano.
Kana pane webhusaiti yandinosimudzira nokuti pane chaizvoizvo zvisingatauri zvakasungwa, ndingasarudza A Free SMS. Haisi kungosununguka chete, unogona kutumira mameseji kunenge chero kupi zvako munyika. Kana uchangobva kuzarura webhusaiti, ichakukumbira kuti uende kondinendi ipi yaunoda kutumira kune iyo, uye yakandityamadza. Kwete chete iwe unogona kutumira SMS isina mahwanda muIndia, unogona kuzviita kune dzimwe nyika muAsia uye pasi. Haisi panjodzi yekushandisa uye iwe unotanga kuishandisa iko pakarepo.
Iye zvino mubvunzo uri mupfungwa dzako ndewokuti, "hazvirevi here zvigamba zvakanamatirwa?" Zvakanaka, ndinofara kutaura kuti hungu, hapana chinhu icho iwe webhusaiti inodikanwa kubva kwauri. Iwe haufaniri kunyoresa kana iwe unoda kugara uye wotarisa matandesi kutanga usati watumira. Iwe webhusaiti inokumisa kana iwe une ad-blocker, asi kune SMS pasina munhu kune imwe nyika? Ndinoda kuchinja chikwata changu blocker kunze kwemaminetsi mashomanana.
AFreeSMS Kubhadhara uye Zvibatsiro
Handisi kuzotaura pamusoro pezvinhu uye kubhadhara zvakakwana nokuti ndinofunga kuti hazvizodiwi. Nokuti kutanga kwezvose, haufaniri kubhadhara kuti utange kushandisa webhusaiti. Uye iyo inototaura iyo pawebsite yekuti: Hapana Kubhadhara Kunodiwa! Chimwe chinhu, kune rumwe rutivi, chinongova chete: kutumira maSMS asingabhadhari. Iwe haugoni kuwana boka reSMS neSMS nhoroondo uye zvose zvezvinhu zvakanakisa. Asi kune dzimwe nguva, kuva nekwanisi kutumira SMS yekusununguka ndiyo yose yaunoda.
Nyora chero ani zvake pasi pose ane AFreeSMS nekudhonza pano. Tumira SMS isina mahwanda muIndia uchishandisa AFreeSMS nekudhonza pano.
Izvo zvakanakisa mukirasi kana zvasvika pakuratidza ndezvekutumira A Text. Kutamba IUI iyo yose inofadza zvikuru uye iri nyore kushandisa, iyi webhusaiti inoendesa vamwe kubva pane maonero ekubatanidza. Paunenge uzarura webhusaiti, unobatwa kune imwe mifananidzo yakaisvonaka yakanaka kutarisa.
Mufananidzo iwoyo wefoni padivi rewebsite? Icho hachisi kungogadzirwa chete. Icho ndicho chaicho chaicho chinoshandiswa nevashandisi kuti utange kutumira SMS kune ani zvake muIndia. Pakutanga, ndaifunga kuti chaingova chinhu chakanaka asi chinosvika kuti icho chinhu chinoshamisa.
Chinhu chinoshamisa apa ndechokuti iwe unokwanisa kukurumidza kupinda mukutumira mharidzo pasina kutoda kunyora. Zvisinei, kutumira mharidzo pasina kubhadhara kunobata zvayo, sezvinoda iwe kupindura captcha, uye iwe unongogumira kungotumira meseji munhu mumwe chete panguva. Asi zvisinei, zviri pachena chinhu chakakura kuti uve nenguva dzekukurumidza, kana iwe uri mune pinch. Asi pane huri chirevo chezvinhu zvaunogona kuwana kubva pakunyora.
Sendatext.co Kubhadhara uye Zvibatsiro
Kunyoresa zita rako uye ruzivo pamusoro pekutumira A Text kunotumira zvimwe zviitiko zvinobatsira. Iwe uchawana kukwanisa kutarisa SMS yako uye nhau yefoni, pakati pevamwe. Asi zvinonyanya kukosha, unogona kutumira zvisizvo zvinyorwa zvinyorwa kubva kumativi ose enyika. Haisi kukanganisika kunyoresa, webhusaiti yacho inongokumbira kungoziva chete. Asi kana waita zvinhu zvose izvo webhusaiti inodikanwa, iwe uri kunyatsogona kushandisa webhusaiti 100%. Uye neizvozvo, ndinoreva kuti iwe hausi kuzorehwa chero nenzira ipi zvayo.
Kana uri kutsvaga basa rinotarisa rakanaka uye iwe unogona kushandisa pasina chero dambudziko, tumira kutumira kunenge kuri. Iye zvino unogona kutumira chakavanzika chako kupwanya meseji uye havazovi kuziva kuti ndiani akatumira. Kana iwe zvino unogona kutumira shoko rinokurumidza kune mukuru wako kunyange pasina foni yako newe. Zvose izvi ndizvo zvaunogona kuita pachena, uye haufaniri kubhadhara chero chinhu.
Edzai Sendatext.co iyi nekudhonza pano.
Globfone ishoko reSMS risina kubhadhara rakapinda-mune kana rinosvika kumushandisi nyore. Pandinotaura zvose, ndaireva kuti havana kushandisa mari yekutsvaga kuti vawane zvakanakisisa zvekushanda kwevashandi kunze uko. Vane webhusaiti iyo iri nyore kufamba nayo, uye chii chinotonyanya kushamisa ndechokuti vane unyoyo yaunogona kushandisa.
Ndizvozvo. Kutumira SMS pasina muIndia uye kumativi ose enyika ikozvino pane yako. Uye sezvandakambotaura, yakasununguka saka haufaniri kurasa ruoko uye gumbo kuti uite. Zvakafanana nekuti WhatsApp inoshanda sei, purogiramu isirimi inobvumira kutumira SMS. Zvisinei, nokuda kwechikamu chino, ini ndichave ndakanyanya kunyanya pa webhusaiti yavo pane zvimwe zvose nokuti zvichida, iwe haungave nefoni yako newe.
Kunyoresa kunyoreswa here? Kwete, kwete chaizvo. iwe unogona kukurumidza kutumirwa kupinda kutumira mharidzo pasina unoda kupa chero ruzivo. Izvo zvakanaka uye zvose, uye kana iwe uri kufunga kana pane zvimwe zvinopesana kumusangano wepachena wemasazwi. Ipapo ini ndichafara ndapindura kwete. Iwe uchiri kuwana zvimwechetezvo uye iwe haufaniri kuona zviziviso kwose kwose, uye unove nechokwadi kuti uri kupa nhamba yako yefoni kune imwe nzvimbo yakatendwa.
Chandinonyanya kuda pamusoro pebasa ndechekuti hakumanikidze kuti ubhabhatire. Kusiyana nedzimwe nzvimbo panzvimbo iyi, unogona kungotumira mukati uye kutumira mahwendefa emafaira kumunhu anenge ari munyika. Uye nokuti hapana kubhadhara kunotarisirwa, hauzovi nehutano hwekupa ruzivo rwako pachako kune vanhu vasina kururama. Ndinonyatsokoshesa mawebhusayithi asina iwe kuburikidza nemitemo yakawanda kuti utange kuishandisa.
Kune zvimwe zvikomborero zvinowedzera kune vamwe vakaita seP2P kugovana uye Kudhidza Mavhidhiyo. Maererano newebsite, iwe unogona kudana foni kuburikidza newebsite yavo. Handina chokwadi nezvezvimwe zvezvinhu izvi nokuti ini handina kuzviedza zvakare. Asi iwe hauna kusununguka kuedza zvinhu zvakabuda kunze. Kunyange zvakadaro, webhusaiti yacho inobata chaizvo zvinyorwa zvine simba zvekutumira SMS. Iwe unogona kutumira magwaro kumunhu chero upi zvake kumativi ose enyika pasina.
Kana uchangobva kuzarura webhusaiti uye pfuurira paTumira Mavara tab, ichakubvunza kuti nyika yako iri kutumira chii. Uye kubvumira pabhokisi rebhokisi rinoratidzira dzimwe nyika dzakawanda dzaunokwanisa kunyora. Haisi India chete kuti unogona kutumira SMS isina mahwanda.
Edza Globfone nekunyanya pano.
Pakuzarura webhusaiti yeFooSMS, ndinoziva pakarepo kuti ivo vakanyanyisa nezvekutumira mameseji. Icho chimwe chemawebsite mashomanana mune urongwa uhwu unoratidza nyore nyore maSMS masimba. Uye iwe unogona kuwana ruzivo rwezvinhu zvose kunze kwekuda kuzvinyorera. Zvechokwadi, kufanana mune dzakawanda pane dzimwe nzvimbo kunze ikozvino, zvinokurudzira kune avo vanovimba navo zvakakwana kuti vasayine.
FooSMS inoti pawebsite yavo kuti ivo ndevamwe vatungamiri veSMS muIndia. Uye nehutano hukuru hwakakura, zviri pachena kuti huchaenda kunounza zvakanakisisa iwe. Vanotsigira vose vanotakura muIndia, saka haufaniri kunetseka pamusoro pemhando ipi zvayo yakabatana. Chaizvoizvo, kana pane shoko raunoda kutumira, ingoshandisa FooSMS uye une chokwadi kuti ichasvika pasinei nokuti kuIndia kungave kupi. Uye zvose zvezvinhu izvi zvinowanikwa kune vashandisi vakasununguka.
FooSMS Registration uye Registered Benefits
Zvinotyisa kuti FooSMS haiti kuti iwe ubhabhatire. Asi kunyoresa kunovhura zvimwe zvingave zvaunogona kushandisa. Heano zvimwe zvezvikomborero zvavari kukurudzira kana ukasarudza kuzvinyorera navo.
Zvisinei, zvinhu izvi zvakachengetwa shure kwebhadhiro. Zvisinei, zvakanaka kuti uzive kuti kana iwe uchida kuenda kune imwe nzvimbo mairi maererano nekuvandudza bhizinesi rako, vanogona kubatsira.
Kune vashandisi vakasununguka, unowana maitiro akadai. Iwe unogona kutumira zvinyorwa zvine chimiro chemavara e145. Nhamba yemiganhu yakakura chaizvo kana ichienzaniswa nedzimwe nzvimbo dzingobvumira huwandu hwevanhu vane 120. Iwe unotova nezvakawanda zvokushanda nadzo kana zvasvika pakutumira SMS pasina. Zvisinei, iwe unogona kunge uchifunga nezvekuchengetedzwa kwekushandisa sendi ino, asi ndinokukurudzira kuti urege kuenda kune avo vasinganetseki.
Kune imwe, webhusaiti yacho ine 300,000 inoshandisa vashandi uye ichiwedzera kuwedzera. Uye izvi zvinoreva kuti pane vanhu vakawanda vanoisa kuvimba kwavo mune iyi kambani. Chinhu chimwe chete chaunofanira kutora ndechekuti vanoona pikiti yako yePI. Chikonzero chekuita izvi ndechekuti vanogona kuve nechokwadi chokuti hausi kushandisa webhusaiti yavo nekuda kwezvikonzero zvisina kunaka. Hazvisiri zvakawanda zvebasa guru, nokuti vari kungova nechokwadi chekuti webhusaiti yavo haisi kushandiswa kutumira mameseji spam kana zviziviso.
Iwe unogona kuedza FooSMS.in nekukanya pano.
Basa rekupedzisira mune runyorwa, asi zvirokwazvo haisi rondedzero iSMS Arrow. SMS mutsva inzira inokurumidza, iri nyore uye yakajeka yokutumira mameseji kune shamwari dzako nemhuri. Uye zvakanyanya ndezvokuti basa racho rakasununguka zvachose. Pane chirevo chokuti hapana chakasununguka munyika nhasi, uye izvozvo zvingava zvakanaka. Asi kune zvimwe zvinhu zvese zviri kusununguka sekukwanisa kutumira SMS muIndia pasina.
Iyo chete inobatsira iyo SMS Arrow yekushandura nzvimbo yavo ndeyokuti vane rusununguko rwekutengeserana pamabasa avo. Vanopa kutumira SMS kutengesa uye SMS yakawanda, asi vanopawo SMS isina mahwanda. Paunenge uzarura webhusaiti, iwe unobatwa kune imwe yezvinyorwa zvinoshandiswa zvinoshandiswa mumushandisi mune urongwa. Chaizvoizvo, inondiyeuchidza nezvekugadzirwa kwepakutanga kwe2000 uye yakandipa chikonzero chekutenda pandakazarura webhusaiti.
Asi haisi iyo inoshandiswa yevashandisi yatinenge tiri kutarisa. Ndiyo hurukuro yemu SMS.
SMS Arrow Kubhadhara uye Zvibatsiro
Kufanana nemamwe emamwe nzvimbo panzvimbo iyi, kubhadhara hazvidiwi. Saka kana iwe uchizeza kupa ruzivo rwako rukuru, saka haufaniri kuva. Ne SMS Arrow, iwe uchakwanisa kutumira mameseji usingatombofambi fomu yekunyora. Uye haufaniri kuchera pawebsite kuti utumire SMS iri nyore.
Zvichida chimwe chezvinhu zvandinotarisa kubva pawebsite ino ndeyekuti une nhamba shoma yevanhu vamunogona. Pandakatanga kutarisa, ndakaona kuti iwe wakanga uine mugove we87 mavara pamashoko ako. Kune vanhu vakawanda, izvozvo zvingave zvakakwana. Asi kune vamwe vanoda kuzviratidza ivo kwechinguva chiduku. Zvichida kana iwe ukanyatsoteerera mazwi ako iwe uchakwanisa kukodzera mharidzo yako.
Kunyangwe paine kuve nekugadzirisa maererano nehuwandu hwevanhu vamunogona kutumira, kushandiswa kwemashoko kweSMS kusina kutendeka. Saka iwe une chokwadi chokuti chero chipi zvacho chaunotumira chichasvika kumunhu waunotumira mameseji. Chimwe chiitiko chaunokwanisa kuedza kunze ndicho chirongwa cheGoogle chavakagadzira. SMS Arrow nevamwe vashomanana mune urongwa vane mapurogiramu asi SMS Arrow inoita kuti purogiramu yavo ive nyore kufamba.
Uchishandisa sms SMS Arrow, iwe uchakwanisa kutumira SMS isina mahwindo kuburikidza nefoni yako pasina matambudziko.
Iwe unogona kupinda SMSarrow nekukanya pano.
Uye apo ini ndinounza nyaya iyi kumagumo, unogona kunge uchikumbira izvo ndinofunga kuti ndiyo yakanakisisa webhusaiti. Mhinduro yangu yaizove, chero chaunoda. Chimwe nechimwe chemasayiti aya ane zvinyorwa zvadzo uye zvakashata. Vamwe vavo vangakukumbira kuti unyore, asi vamwe vakanaka vasina kukumbira chero ruzivo kubva kwamuri. Chaizvoizvo, urongwa waunoona pano ndiwo kamuti wezvirimwa, hapana chimwe chazvo chakaipa.
Kunyangwe kune zvimwe zvakawanda zvekusarudza kunze uko, zvichiri kungwarira kana uchibata navo. Pane zvakawanda zvinogona kutadza kuburikidza nekupa ruzivo rwako kune mawebsite asina kuwanikwa. Somuenzaniso, unogona kunge uchipa ruzivo rwemunhu kune avo vanogona kushandisa nekuishandisa. Iwe unogona kunge uchikupa iwe neshamwari yako nhamba yefoni kune vanhu vasina kururama pavanenge uchishanda. Ndicho chinhu chakanaka chokuchenjerera, uye ndinongotaura chete kuti unoda kunamatira kune mawebsite akave akaedzwa uye akaedzwa.
Zvisinei, kune mamwe madhaimani ari mumatambudziko kunze uko. Ndiani anoziva? Iwe unogona kukwanisa kuwana mgodi wegoridhe. Asi kudzokera kune urongwa urwu, kune nzvimbo dzakawandisa dzekutumira mameseji kusununguka muIndia uye nekushandisa kwega, imwe yeiwebsite idzi dzakanaka. Kana iwe uchida kutora danho rinowedzera uye uribatanidza naro kune webhusaiti yako, ipapo panewo dzimwe nzira dzaunogona kuwana kwauri zvakare.
Ko nyaya ino yakakubatsira here? Rega ndizive mumashoko acho!
Yakanakisa mawebhusaiti kutumira asingagumi SMS kune nharembozha mune chero nyika
Maitiro Ekuverenga uye Tumira SMS Meseji Mameseji paPC
Android Meseji Pane Desktop: Maitiro Ekutumira & Kugamuchira Kubva kuPC Yako